1. Maninona no ilaintsika ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN) na dia tsy azo ihodivirana aza ny fahanterana, misy ny fanantenana ny hamadika ny fizotrany, noho ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN). Ny miaina amin'ny fahanterana masaka dia nofinofin'ny olon-drehetra ary misy fitambarana toy ny NMN izay manampy antsika hahatratra ilay nofy. Fantatro fa mety manontany tena ianao hoe ahoana no ifandraisan'ity fitambarana ity… Continue Reading
1. Vitamina maharitra L-Ergothioneine (EGT) L-Ergothioneine (EGT) fantatra ihany koa amin'ny hoe "vitamina maharitra". Ny vitamina maharitra dia manondro ny otrikaina ao anatin'izany ny vitamina, mineraly ary singa hafa izay fanalahidin'ny fahanterana ara-pahasalamana. Ny lisitry ny vitamina maharitra an'i Bruce Ames dia misy vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, biotin, vitamina C, choline, vitamina D, vitamina E,… Continue Reading